Caalamka Online » Ra’iisul Wasaaraha Dalka oo madax kala duwan kula kulmay magaalada Davos
Ra’iisul Wasaaraha Dalka oo madax kala duwan kula kulmay magaalada Davos
January 24, 2018 - Written by Khaliif - Edited byKhaliif
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ka qeyb galaya shirka Dhaqaalaha Adduunka ee ka socda magaalada Davos ee dalka Switzerland ayaa waxaa uu kula kulmay Madax kala duwan oo shirka ka qeyb galaya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa shalay la kulmay Madaxa IMF Christine Legarde, waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan iyo sidii Soomaaliya ay deymo ugu heli laheyd IMF.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa la kulmay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Qatar oo shirka ka qeyb galaya, iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa.
Waxaa uu kaloo Ra’iisul Wasaaraha la kulmay Madax ay ka mid yihiin Madaxweyne kuxigeenka Koofur Afrika iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Britain Tony Blair oo ka mid ah Marti sharafta lagu casuumay shirka.
Dhinaca kale Safiirka Soomaaliya ee Switzerland Faadumo Insaaniya ayaa sheegtay in Ra’iisul Wasaaraha uu khudbad ka jeedin doono shirka dhaqaalaha adduunka.
Soomaaliya ayaa horay uga qeyb gashay shirka Dhaqaalaha Adduunka, waxaana horay u tagi jiray heer Wasiir, sida Wasiirkii hore ee Qorsheynta C/raxmaan Ceynte oo sanadkii 2016 ka qeyb galay shirkan iyo Wasiiru dowlihii hore ee Madaxtooyada Faarax C/qaadir oo shirka dhaqaalaha adduunka horay uga qeyb galay sanadkii 2013.